खतरा उच्च भोल्टेज | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! खतरा उच्च भोल्टेज | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
खतरा उच्च भोल्टेज को बाट प्रेरित छ 2002 विद्युत वटा देखि नै नाम को गीत हिट, एक अमेरिकी रक ब्यान्ड. यो सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस मोबाइल खेल पुरस्कार प्रशस्त दिनको दुई बोनस राउंड्स आउँछ.
अष्ट्रेलिया स्थित, ठूलो समय गेमिङ पनि BTG रूपमा जानिन्छ जो अनलाइन गेमिङ उद्योग मा सानो कम्पनीहरु मध्ये एक छ. यो सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस मोबाइल खेल पनि तिनीहरूलाई विकास छ.
चार पङ्क्ति स्लट संग छ रील, यो सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस मोबाइल खेल एक मन-boggling प्रदान 4,096 तपाईं आफ्नो बाजी थाप्न र पनि जित्न सक्छौं जसमा तरिका. outlandish संयोजन सिर्जना गरेर केही fantastical WINS प्राप्त गर्न तयार. यो सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस मोबाइल खेल तपाईं 20p देखि शर्त दिन्छ 500 जहाँबाट प्रत्येक स्पिन लागि, कुनै पनि समयमा यस्तो डेस्कटप रूपमा सबै प्रमुख उपकरणहरूमा, ल्यापटप, स्मार्टफोन र ट्याब्लेट. तल्लो मूल्य प्रतीक मानक कार्ड प्रतीक द्वारा चित्रण गरिएको छ 9, 10, जे, Q, K, र एक. चमक बलमा जस्तै विभिन्न प्रतीक, Bells, Tacos, Skulls, र हृदय यो खेल मा उच्च मूल्य प्रतीक हो. त्यहाँ दुई जंगली प्रतिमा यो स्लट मा पनि छन् र तिनीहरू सबै गेमप्लेको गर्न उत्तेजना ल्याउन.
wilds विस्तार- दुई जंगली प्रतीक मात्र रील देखा2र 5. तिनीहरूले सारा रील ढाक्न विस्तार र अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन. आगो जंगली प्रतिमा धेरै WINS सिर्जना गर्न अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ. विद्युत जंगली पनि अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ तर यो पनि एक प्राप्त हुनेछ6पटक जीत मा गुणक.
फ्री Spins- हृदय को स्क्याटर प्रतिमा छ. यो सुविधा ट्रिगर र बीच दुई निःशुल्क spins सुविधा तपाईं चयन गर्न अनुमति दिन्छ.
नरक फ्री Spins को गेट्स- यो सुविधाले तपाईंलाई अनुदान7निःशुल्क spins प्लस सुविधा को सम्पूर्ण अवधि लागि जंगली रूपमा अनियमित प्रतीक. तपाईं टाँसिएको wilds समेटिएका सम्पूर्ण रील रही लागि अतिरिक्त तीन निःशुल्क spins प्राप्त. निःशुल्क spins सम्म जान सक्नुहुन्छ 19 यो राउन्ड मा.
उच्च भोल्टेज फ्री Spins- यो सुविधा अनुदान 15 मुक्त spins. यो सुविधा समयमा तपाईं जंगली स्ट्याक भने त्यसपछि तपाईं 66x गुणक गर्न संग पुरस्कृत गरिनेछ.
यसलाई दुई कार्य-खचाखच भरिएको मुक्त spins बोनस राउंड्स आउँछ एक सांगीतिक स्लट छ. यो सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस मोबाइल खेलाडी गर्न गेम भुक्तानी बारेमा छ 95.67%.